Iindaba -Oonobangela bentshukumo kunye nengxolo yenkqubo yesanti kunye neendlela zokuphelisa
Izinto ezibangela ukungcangcazela kunye nengxolo yenkqubo yesanti kunye neendlela zokuphelisa
Kukho imithombo emininzi yentshukumo kunye nengxolo kwinkqubo ye-hydraulic system, kubandakanya iinkqubo zoomatshini, iimpompo ze-hydraulic, iivev hydraulic kunye nemibhobho. Ukungcangcazela nengxolo yenkqubo yoomatshini Ukungcangcazela nengxolo yenkqubo yoomatshini ikakhulu kubangelwa yinkqubo yokuhambisa ngoomatshini eqhuba impompo ye-hydraulic, ikakhulu kwezi zinto zilandelayo.
1. Ukungalingani komzimba ojikelezayo Kwizicelo ezisebenzayo, uninzi lweemoto ziqhuba impompo ye-hydraulic ngokudibanisa. Kunzima kakhulu ukwenza le mizimba ijikelezayo igcwalise ibhalansi eguqukayo. Ukuba amandla angalinganiyo makhulu kakhulu, iya kujikeleza xa ivelisa ukungcangcazela okukhulu kwesikhafu esijikelezayo kunye nengxolo evelayo.
2. Ufakelo olungalunganga Inkqubo ye-hydraulic ihlala ibangela ukungcangcazela nengxolo ngenxa yeengxaki zokufaka. Ezifana nenkxaso kumbhobho wenkqubo engekho mgangathweni kunye neziphene ezisisiseko, okanye impompo ye-hydraulic kunye ne-motor shaft azigxilanga, kwaye ukudibana kukhululekile, oku kuya kubangela ukungcangcazela okukhulu nengxolo.
3. Xa impompo yesanti kubunzulu baphantsi isebenza, ukuba ukuxhathisa kombhobho wokutsala i-hydraulic kukhulu kakhulu, ngeli xesha, ioyile ye-hydraulic ilibele kakhulu ukuba ingagcwalisa isitshixo sempompo sokufunxa i-oyile, oko kubangele isithuba esinciphileyo sokufunxa ioyile. Isisu kunye nokwenza uxinzelelo olubi. Ukuba olu xinzelelo lufikelela nje kumoya weoyile Xa uxinzelelo lwahluliwe, umoya owanyibilika kwasekuqaleni kwioyile uya kuncitshiswa kwisixa esikhulu, wenze imeko yasimahla yamabhamu omoya. Njengoko impompo ijikeleza, le oli ineebhabhu zomoya igqithiselwa kwindawo yoxinzelelo oluphezulu, kwaye amaqamza omoya abangelwa luxinzelelo oluphezulu. Shwabanisa, qhekeza kwaye unyamalale, wenze umothuko ophezulu wengingqi ophakamileyo
Indlela ethile yile:
1. Indibaniselwano yombhobho wokutsala impompo kufuneka ivalwe ngokuqinileyo ukuthintela ukungeniswa komoya;
2. Yila ngokufanelekileyo itanki yamafutha. Ukuthintela i-cavitation kwiivalval hydraulic Ukuvalwa kwezivalo ze-hydraulic kwenziwa ikakhulu ukunciphisa ukuxhathisa kwempompo. Amanyathelo aqhelekileyo asetyenziswa kubandakanya ukusetyenziswa kombhobho omkhulu wokutsala ubukhulu, isixhobo sokucoca esinomthamo omkhulu, kwaye kwangaxeshanye ukunqanda ukuvaleka kwesihluzi seoyile; ukuphakama kokufunxa kwempompo kufanele kube kuncinci ngangokunokwenzeka.
3. Thintela ukuveliswa kwesiphithiphithi nokujikeleza kwimibhobho. Xa kuyilwa umbhobho wenkqubo yesanti kubunzulu baphantsi, icandelo lombhobho kufuneka lizame ukunqanda ukwanda ngokukhawuleza okanye ukucutha; ukuba kusetyenziswa ityhubhu egobile, irediyo yayo egobileyo kufuneka ibe ngaphezulu kwamatyeli amahlanu ubukhulu bepayipi. La manyathelo omabini anokuthintela ngokufanelekileyo ukuveliswa kwesiphithiphithi kunye nokujikeleza kombhobho.
Izixhobo zecandelo lamandla zisetyenziselwa ukubonelela ngamandla kwii-actuator, ubukhulu becala iimpompo ze-hydraulic. Emva kokuba ulwelo lokuphuma ludlula ngolawulo oluthile kunye nesixhobo sokuhlengahlengisa (iivelufa ezahlukeneyo zamanzi) kwiiactuator, iiactuators zinokugqibezela iintshukumo ezithile, ezinje ngeesilinda zehydraulic. Telescopic okanye hydraulic motor ukujikeleza!
Ixesha Post: Nov-17-2020